अमेरिकामाथि परमाणु आक्रमण भए यस्तो रहेछ राष्ट्रपतिलाई लुकाउने स्थान | Rajmarga
अमेरिकामाथि परमाणु आक्रमण भए यस्तो रहेछ राष्ट्रपतिलाई लुकाउने स्थान
यदि अमेरिकामाथि परमाणु बम आक्रमण हुने स्थिति आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कहाँ लगिएला ? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्रुमेनदेखि लिएर ट्रम्पसम्म सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका लागि यस्तो स्थितिमा बंकरमा रहने सुविधा छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि बंकर
परमाणु आक्रमणको खतरा उत्पन्न हुने बित्तिकै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एउटा सुरक्षित स्थानमा लगिनेछ । यसमध्ये एउटा बंकर व्हाइट हाउसमुनि छ जुन सन् १९५० मा निर्माण गरिएको थियो । यस्तै अर्को बंकर भर्जिनियाको ब्लू रिज माउन्टेनमा माउन्ट वेदर नामको शिखरमा बनाइएको छ।
अमेरिकाको नेभीले ‘पिनट आइल्याण्ड’ नामको एउटा अर्को बंकर अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीका लागि बनाएको थियो । यो बंकर फ्लोरिडामा पाम बिच हाउस नजिकै छ, जहाँ केनेडी अक्सर जाने गर्दथे ।
पाम बिच हाउस र बंकरका बिचको दुरी मात्र दश मिनेटको छ। यो बंकरलाई ‘डिटेचमेन्ट’ होटल पनि भन्ने गरिन्थ्यो, जुन बंकर निर्माण गर्न ९७ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो ।
ट्रम्पसँग उनको आफ्नै पनि एउटा बंकर छ, जुन फ्लोरिडामा ‘मार–ए–लागो’ नामको उनको निजी प्रोपर्टीमा छ । यदि राष्ट्रपतिका लागि निर्माण गरिएको बंकरको कुरा गर्ने हो भने उनीसँग तीन बंकर छ, जसमा पिनट आइल्याण्ड, व्हाइट हाउस र माउन्ट वेदर समावेश छन ।
‘पिनट आइल्याण्ड’ मा राष्ट्रपतिका साथ उनका एक दर्जन सहयोगी र सचिव पनि जान सक्छन् । यो बंकरमा कुल ३० जनाका लागि ठाउँ छ।
९÷११ को आक्रमणका क्रममा व्हाइट हाउस बंकरमा तैनाथ रहेका मारिन रोबर्ट डार्लिंगका अनुसार अमरिकी अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिसमेत त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरेको छ, जो शीष पदमा बहाल छ।
डार्लिंग भन्छन्–अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बरको आक्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति डिक चेलीले बंकरमा काम गरिरहेका थिए । उनका साथ उनकी श्रीमती, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कोंडोलिजा राइस, रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफिल्डसमेत केही अन्य व्यक्ति पनि थिए । यही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस एयर फोर्स वनमा थिए ।
कंग्रेस सदस्यहरुका लागि पश्चिमी भर्जिनियामा व्हाइट हाउस सल्फर स्प्रिंग्स नजिकै ग्रीनब्रायर रिसोर्टमा एउटा बंकर छ। यो बंकरको नाम प्रोजेक्ट ग्रीक आइल्याण्ड थियो र दशकौसम्म यसलाई प्रयोग गरियो । तर, यसको नाम सन् १९९२ मा यो बंकरको प्रयोग बन्द भएपछि सामुने आयो ।
परमाणु बमबाट बचिन्छ बंकरमा ?
भर्जिनियामा माउन्ट वेदरको वरपर बस्नेहरु यसलाई ‘डुम्सडे सिटी अर्थात प्रलयको दिनवाला सहर भन्ने गर्दछन् । ब्लूमाउन्ट, भर्जिनियामा रहेको १७५४ फिट माउन्ट वेदर शिखरलाई राष्ट्रपति र उनका सहयोगीहरुका लागि एउटा बंकरमा परिवर्तन गरियो ।
माउन्ट वेदरको रेखदेख अमेरिकी ‘फेडरल एजरजेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी’ अर्थात फेमाले गर्ने गर्दछ ।यसको सुरुवात सेप्टेम्बर २००१ मा हल–कायदाको आक्रमणपछि गरिएको हो । फेमा निर्देशकले अक्टोबर २००१ मा कंग्रेससामु दिएको बयानमा यसबारे पनि बताएका थिए । यद्यपि उनले यसबारे थप जानकारी दिएनन् ।
माउन्ट वेदरदेखि पिनट आइल्याण्ड र मार–ए–लागो बंकरलाई शीतयुद्धका क्रममा बनाइएको थियो । ‘मार–ए–लागो’ बंकर १९५० को सुरुवातमा धनी महिला, मर्जरी मेरीवेदर पोष्टले बनाएकी थिइन् । पोष्टलाई कोरियासँग युद्ध हुने आशंका थियो ।
ट्रम्पले यो प्रोपर्टी सन् १९८५ मा किनेका हुन् । उनका साथ यो बंकरमा जाने ६.५ फिटको प्रोजेक्ट म्यानेजर वेस ब्लेकमैनले बताएका थिए कि यो बंकरमा जानु कुनै पुरातात्विक खोजजस्तै थियो । ब्लेकमैन भन्छन्–मैले यो बुझिन कि बंकरको बलियोपनका लागि किन लगातार काम गरिँदैछ, किनभने जब महायुद्ध जस्तो केही भयो भने तब बच्नका लागि कुनै स्थान नै रहने छैन ।
यता वन नेशन अन्डरग्राउण्ड पुस्तककी लेखिका कैनेथ रोज भन्छिन् कि यदि बंकरमा सिधै आक्रमण गरियो भने तब कुनै पनि प्रकारको बचाउको काम आउने छैन । किनभने ऊर्जा र तापमान निकै बढी हुनेछ । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: सपनामा यौनसम्बन्धी कस्तो सपना देख्नुको अर्थ के हुन्छ ?
Next post: दिमागमा छ मुखमा आउँदैन किन ?